Momba anay: APLUS Global Ecommerce
Ekipa matihanina be zotom-po izay manana fahaiza-manao mendrika amin'ny tsena no mahatonga ny fo sy ny fanahin'ny Aplus Global Ecommerce. Mino izahay amin'ny famoronana tontolon'ny e-Commerce miroborobo, ny fiasana isan'andro ary ny fivoahana mba hanomezana tolotra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa. Manome serivisy fananganana kaonty Amazon Sellers tsara indrindra izahay.
Orinasa mijery ny tontolon'ny fandraharahana mahasalama, ny tsena mifaninana ary ny tontolo mandroso ankehitriny, ny e-commerce A Plus Global dia iray amin'ireo toerana tsara anampiana ny orinasan-tserasera hampandeha tsara. Manome serivisy 360 ° ho an'ireo orinasa e-Commerce izahay. Manomboka amin'ny fanampiana ny orinasa e-Commerce hanana kaonty mpivarotra mahasalama ka hatramin'ny famerenana amin'ny laoniny ny kaonty mpivarotra amazon dia manana vahaolana ho an'ny rehetra izahay. Ny tanjona dia ny tsy hanampy ireo orinasa hiroborobo amin'ny tsena toa an'i Amazon fa koa hamorona ny faritra misy azy eo amin'ny tontolon'ny varotra. Miezaka ny hitondra ny orinasa mifanaraka amin'ny làlana mivelatra haingana amin'ny tontolon'ny e-Commerce izahay ary hijery bebe kokoa hatrany. Ny serivisinay no tsara indrindra amin'ny tsena manao orinasa A Plus Global ho orinasa matoky. Manana ekipa olona voafantina tanana avy amina fiaviana maro samihafa izahay ary manana fahaizana teknika izay takiana amin'ny tsena tokoa. Ny fahamendrehany sy ny fanoloran-tenany dia manome lanja bebe kokoa an'ireo serivisy, ary izany no USP an'ny A Plus Global e-Commerce. Fantatra ny serivisinay antoka 24 ora amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny kaonty Amazon Seller. Ny serivisy fanaraha-maso momba ny fahasalamana mampiroborobo ny varotra dia mendrika andrana ihany koa. Mandrakotra serivisy maro karazana, miara-miasa aminao izahay amin'ny sehatra efatra lehibe:
Serivisy Antso an'i Amazon - manampy anao izahay hivarotra anao indray ao anatin'ny 24 ora
Fahasalamana amin'ny kaonty mpivarotra: mitazona ny fahasalamanao kaonty ao anatin'ny fetra farany anananay miaraka amin'ny fahaizantsika
Fanohanana ara-barotra sy varotra: manampy anao hitombo izahay fa tsy haharitra
Fampandrosoana tranokala sy fampiharana- omenay anao ny lampihanao manokana hataonao
Manome serivisy sy fonosana namboarina mifanentana amin'ny filanao izahay, mifangaro amin'ny politikan'ny sehatra tsirairay. Manome tolotra ho an'ny mpanjifa miely erak'izao tontolo izao, A Plus Global dia manome ny serivisy ilaina indrindra toy ny "Famerenana ny kaonty mpivarotra Amazon" takian'ny kaontin'ny mpivarotra anao amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena, ny fahaizany ary ny fahaizan'ny ekipanay.